The flora in Venezuela: kacsi badan iyo noocyo badan | Safarka Absolut
Ubaxyada ku yaal Venezuela waxay xiriir dhow la leeyihiin juquraafi ahaan halka uu ku yaallo waddanka. Waxay ku taal qaybta woqooyi ee Koonfurta Ameerika, degto dhul tropical, oo dhirtu ka jawaabto xaaladdan, laakiin sidoo kale leh noocyo kale iyada oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanta nidaamka deegaanka.
Sidaad fahmi doontid, ubaxa Venezuela aad buu ugu kala duwan yahay meelaha buuraleyda ah sida Xadka buurta Merida in ku jira Webiga Orinoco. Oo weliba way ku kala duwan tahay tan dambe iyo tan Xeebaha badda Kariibiyaanka. Si kastaba ha noqotee, waxaan diiradda saari karnaa waxa ugu caansan dhammaan dhirta ku taal Venezuela. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 The flora ee Venezuela, noocyo kala duwan oo hodan ah
1.1 Araguaney, geedka caadiga ah ee Venezuela
1.3 Qaadada caanka ah ee Aragua
1.5 The morichal, flora ee Venezuela ee bannaanka bari
1.6 Orchid, ayaa aad ugu badan dhirta ku taal Venezuela
1.7 Ubax Cayenne
1.8 Warshadda Cacao
1.9 Espeletia, oo badanaa ku taal gobolka Mérida
1.10 Shimbiraha Jannada caadiga ah ee Aragua
The flora ee Venezuela, noocyo kala duwan oo hodan ah
Venezuela waa waddan hodan ku ah dhirta, sidaa darteedna waa lagu dhawaaqay mid ka mid ah waddamada dariska la ah waxaa qoray Qaramada Midoobay. Dhamaan ku dhowaad hal milyan oo kilomitir oo laba jibbaaran waxaa jira aagag kala duwan sida keymaha Amazon, wabiga Orinoco, buuraha Andean ama xeebta Caribbean.
Waxaas oo dhan, ubaxyada ku yaal Venezuela ayaa koobaya ilaa soddon kun oo nooc ka duwan dhirta. Sidoo kale sababtan awgeed, aad ayey noogu adag tahay inaan ku siinno dib u eegis faahfaahsan dhammaantood. Sidaa awgeed, waxaan kuu sheegi doonaa astaamaha ugu badan.
Araguaney, geedka caadiga ah ee Venezuela
Noocyo badan oo kala duwan, haddii uu jiro geed caadi ah oo ku yaal waddanka Mareykanka, waa the araguaney, sidoo kale loo yaqaan guayacán, tajibo ama oak huruud ah. Magaceeda cilmiyaysan waa Tabuia chrysantha waana wax aad ugu badan Venzuela in 1948 lagu dhawaaqay Geedka qaranka ee dalka.
Waxay ku baxdaa badanaa keymaha tropophilic ee Llanos, oo leh cimilo dhex-dhexaad ah semi-oomane, una taagan soo-bandhigiddeeda ubaxyo jaalle ah iyo dawan u eg. Ma gaarayo dherer badan, qiyaastii shan mitir, ama dhumuc tan iyo markii jirkiisu leeyahay dhexroor qiyaastii ah lixdan sintimitir. Laakiin waa geed qurux badan oo ku soo jiidan doona.
Waa nooc kale oo geedo caan ku ah Venezuela. Ka weyn kii hore, wuxuu gaari karaa labaatan mitir oo dherer ah laamahiisuna waxay ka furan yihiin aag ballaaran. Sidoo kale, waa nooc ka mid ah dhulalka ku-meel-gaadhka ah waxayna aad ugu dhacdaa aagga caasimadda Venezuela oo sidoo kale loo yaqaan Couji oo ka yimid Caracas.
Qaadada caanka ah ee Aragua
Sidaas ayaa looga yaqaan gobolka Aragua, halka Carabobo ay ugu yeeraan shumac, magaceeda sayniska waa Gyranthera caribensis. Waa geed weyn oo caan ku ah Xeebta buuraha ee Venezuela. Si qaas ah, waxaad ka heli doontaa meelaha keymo qoyan. Waxay gaaraysaa lixdan mitir oo dherer ah, laakiin xiiso leh qoryahaagu waxtar uma leh ujeeddooyin ganacsi aad u jilicsan. Waxa kale oo aad u kala sooci doontaa xididdada sambabaha ee astaamaha u ah iyo tan ferns oo ka baxa laamaheeda.
Cilmiyan caan ku ah Anacardium ayaa ka sarreeya, wax badan ayaa jira labadaba dhulka hawdka iyo savanna. Waxay gaari kartaa XNUMX mitir oo dherer ah waxayna leedahay jirridda toosan iyo silsilad dhererkeedu yahay dhowr mitir. Ubaxyadiisu waa kuwo yaryar oo cagaar cad oo midab cad leh, in kasta oo markay gaboobaan casaan noqdaan oo a udgoon daran.
The morichal, flora ee Venezuela ee bannaanka bari
Geedkani wuxuu caan ku yahay waddanka Mareykanka oo ah inuu ka soo baxo timirta moriche, aad ugu badan gudaha bannaanka bari ee dhulkeeda. Waxay u baahan tahay meelo ay biyuhu ku fataheen si ay u baxaan taasna waxay leedahay midab la mid ah tan shaaha taas oo ay ugu wacan tahay walxaha humic ee ku jira. Waxay gaari kartaa ilaa toban mitir oo dherer ah. Iyada oo uu calaacashiisa ku Hindida Cariña Waxay sameeyaan yaabab run ah oo dambiisha sidaa darteed aad ayey u qiimeeyaan.
Orchid, ayaa aad ugu badan dhirta ku taal Venezuela
Haddii aan kuu sheegno in orchidku yahay ubax qurux badan, waad nala raaci doontaa. Laakiin, marka lagu daro, sidoo kale waxay aad ugu badan tahay dhirta Venezuela. Xaqiiqdii, waddanka oo dhan waa la aqoonsaday ku dhowaad toddoba iyo toban boqol oo nooc oo ubax ah.
Waxay badanaa ku dhacaan aagagga kaymaha daruuraha iyo, haddii araguaney uu ahaa geedka qaranka, orchidku wuxuu leeyahay isla cinwaankaas marka loo eego ubaxyada waddaniga ah. Tan ugu badan waa Cattleya mossiae o laga yaabaa Ubax wayna kuu sahlanaan doontaa inaad ka hesho labada dhinac ee buuraha dooxada, gobolada sida Vargas, Miranda ama Carabobo.
Waxay kuu soo jiidan doontaa dareenkaaga midabkiisa midabkiisu casaan daran yahay, oo jiidaya lilac. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira midabbo kale oo badan iyo waliba noocyo aad u xiiso badan sida waxa loogu yeero Dracula lotax ama baaxadda ay Oncidium, oo u qaabeysan cayayaan.
Sidoo kale waa mid aad u soo noqnoqota guud ahaan dhulka Venezuela. Magaceeda cilmiyaysan waa Hibiscus waxaana ka mid ah noocyo geedo yaryar leh iyo geedo yaryar. Laakiin waxa ugu quruxda badan ee ku saabsan noocan waa ubaxyadiisa, oo ah midab casaan daran, oo cabbirkiisu weyn yahay iyo stamens ku yaal bartamaha.
Astaamo kale oo dhir gaar ah ku leh Venezuela ayaa ah faro badan geedka kookaha. Xaaladdan oo kale, dhulka dalka wuxuu bixiyaa saddex nooc: saddex midnimo, Creole y shisheeye, inkasta oo tan dambe ay tahay isku darka labada hore.
Espeletia, oo badanaa ku taal gobolka Mérida
Caadi ahaan loo yaqaan jajab, waxaa iska leh qoyska Asteraceae waxayna ku dhacdaa gaar ahaan waan istaagnay iyo meelaha kale ee oomanaha ah. Sababtaas awgeed waxaa loo kala saaraa dhul-cagaaran iyo buuro dhaadheer. Xaqiiqdii, waxay ku koraan ugu horreyn meelaha sare ee ka sarreeya saddex kun iyo afar boqol oo mitir. In Venezuela waa wax caadi ah in laga helo Xadka buurta Merida.
Shimbiraha Jannada caadiga ah ee Aragua
Haddii tii hore ay ku soo noqnoqon jirtay gobolka Mérida, ubaxan cajiibka ahi wuxuu ku jiraa kan Aragua, gaar ahaan buuraheeda xeebeed. Waxaa cilmi ahaan loo yaqaan Heliconia acuminata waxayna u taagan tahay ubaxyadeeda, midab jaalle ah oo daran oo leh qayb sare oo liin ah.
Gabagabadii, waxaan ku tusnay qaar ka mid ah noocyada ugu caansan ee flora Venezuela. Laakiin waan kuu sheegi karnaa isaga kuwa kale oo isaga la mid ah Bucare ceibo, oo leh ubaxyadeeda liinta leh, the pinus caribaea o geed canabah ferns waaweyn iyo waxyaabaha gaarka ah mas ubax qajaar, dhammaantood si isku mid ah u qaali ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » The flora ee Venezuela
Had iyo jeer leh Nuqul, ama ma ogi inay noqonayso Wikipedia ama adiga ...
Samee waxyaabaha asalka ah = 3
Ma helin wixii aan raadinayay, taas waxaan u adeegsadaa Wikipedia iyo hadda
Ku jawaab Mariana Alce